TrueCaller, fadio ny antso Spam manelingelina | Vaovao IPhone
Iza no tsy sasatra amin'ireo antso manelingelina ataon'ny mpandraharaha telefaona amin'ny 4 tolakandro? Sa manelingelina anao izy ireo rehefa mifantoka bebe kokoa amin'ny asanao ianao mba hanomezana vokatra tsy mahaliana anao akory? Marina fa efa ela i iOS dia nampiditra ny safidy hanakanana ny fifandraisana, saingy tsy maintsy fantatrao ny nomeraon-telefaon'izy ireo, izay tsy azo atao foana. TrueCaller dia manao izany ho anao, tsy ny mamantatra ireo isa ireo izay manao spam amin'ny telefaona ihany, fa mamela anao hanakana azy ireo mivantana koa mba tsy hanelingelina anao indray. Fampiharana azo ampiasaina amin'ny Android sy iOS izy io, ary maimaim-poana tanteraka, noho izany dia saika voatery hanandrana azy io.
Ny fampiharana dia misy ao amin'ny App Store (ary amin'ny Google Play), maimaim-poana ny fisoratana anarana ary koa, ho an'ireo izay manome lanja ny fiainana manokana momba ny angon-drakitra dia azonao atao ny manamboatra ny rindranasa mba tsy hahafantaran'ny mpampiasa hafa fa ao anatiny ianao. Ahoana no ahalalan'ny TrueCaller ny laharan'ny telefaona manao antso spam? Manangona angona avy amin'ny loharano samihafa izy, ary mazava ho azy fa avy amin'ny mpampiasa azy ihany. Izay mampiasa ny fisoratana anarana dia afaka mitatitra isa vaovao izay nanao antso Spam, ary raha vao nampandrenesin'ny mpampiasa ampy izany isa izany mba hahafahany manamarina izany tatitra izany dia hampidirina ao amin'ny lisitry ny Spam.
Toy ny hoe antivirus io dia havaozina matetika miaraka amin'ny isa vaovao ny TrueCaller, ary raha misy miantso anao ny iray amin'izy ireo, na dia mbola tsy niantso anao aza izy ireo ary tsy fantatrao, dia hiseho miaraka amin'ny fiaviana mena sy miaraka amin'ny lohatenin'ny Spam, tsy mila manao na inona na inona ianao. Eny eny, tsy maintsy omenao alàlana hanakana ireo antso ao anaty ny Fikirana> Telefaona> Fiantsoana manakana, fa rehefa vita izany dia azonao adinoina fa napetrakao izy io satria hankafy ny hatsarany ianao nefa tsy mila manao na inona na inona. Fampiharana tsy maintsy ananana saika ho an'ny olona rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » TrueCaller, fadio ny antso Spam manelingelina
Tena tsara tarehy ity app ity! Miankina amin'ny baolin'ireo avy ao amin'ny Jazztel aho, manana isa am-polony maro izy ireo.
Miasa amin'ny firenena samihafa ve ny fampiharana sa any Espana ihany?
Ny Portrait Mode an'ny iPhone 7 Plus no mpiaro ny fanambarana Apple vaovao